Maraykanka, oo tilmaamay in ciribtir qowmiyadeed uu ka socdo Galbeedka Tigray. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maraykanka, oo tilmaamay in ciribtir qowmiyadeed uu ka socdo Galbeedka Tigray.
Xoghayaha ayaa u sheegay guddiga in ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu yahay hogaamiye dhiiragelin leh, loogana baahan yahay in shacabkiisa Tigray uu ka badbaadiyo dhibaatada haysata.
Xukuumadda Addis Ababa oo ka jawaabtay hadal uu dhawaan xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka ka sheegay xaaladda Tigray ayaa sheegtay inay ka go’an tahay ka gungaaridda tacaddiyada laga soo sheegay gobolkaas.
Previous articleMidowga Musharaxiinta oo ka Tacsi u diray Umada Somaliyed geeridii ku timid Madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed.
Next articleMudaaharaadyo Wali ka socda Wadooyinka waawayn ee Dalka Koonfur Afrika Kadib gadood ka dhashay ardayda jaamacadaha
Safiirka Soomaaliya ee fadhigiisu yahay Dalka Mareykanka Ali Sharif ayaa la kulmay Dina Kawar oo ah Safiirka Dalka Urdun ee halkaasi. Kulankaan ayaa looga hadlay...